Nezvedu - Shenzhen Wofly Technology Co., Ltd.
Wofly yakavambwa muna 2011. Yakafarira mukurumbira mukuru nekupa yakazara yakazara mhando yepamusoro zvigadzirwa zvegasi zvishongedzo kune vatengi vayo vepasirese.
Wofly akatanga semugadziri weanodzora, gasi manifolds, pombi fittings, bhora mavharuvhu, tsono mavharuvhu, tarisa mavharuvhu & solenoid mavharuvhu. Chinangwa chedu ndechekupa yakavimbika kwazvo, chaiyo uye mhando yepamusoro yezvigadzirwa kumutengi wedu.
Zvese dhizaini uye kugadzira kwezvigadzirwa zvaWofly zvakanyatsoenderana neIO. Kunze kwezvo, Wofly akawanawo zvitupa zveRohs, CE uye EN3.2 yeayo maindasitiri uye ekurapa zvigadzirwa.
Chinangwa chekambani yedu ndechekupa basa rehunyanzvi rinowanikwa kune vatengi vedu. Izvi zvinowanikwa kuburikidza nezvinhu zvakabatanidzwa zvekuvimbika, kuvimbika, uye ruzivo rwehunyanzvi rwezvigadzirwa zvatinotengesa. Kugutsikana kwevatengi kwagara kuri chinangwa chikuru cheWofly. Inovavarira kuzvitsauranisa pachayo kubva kune vamwe vakwikwidzi nekupa iyo yepamusoro mhando chigadzirwa, yemakwikwi mitengo, pamwe nekukurumidza kuendesa kuita. Kunze kwemhando dzayo dzakavanzika, Wofly inopawo OEM / ODM sevhisi yekambani inozivikanwa pasi rese kugadzirisa zvido zvevatengi zvakasiyana uye kubatsira vatengi vedu kunatsiridza kuchengetedzeka, chengetedzo, uye kuwanikwa kwavo gasi masisitimu.
Kuve "One-Stop Yese Solution Provider" yevatengi vedu vanokosheswa uye kupfuura zvavanotarisira muzvigadzirwa nerutsigiro.
Kuti tiwedzere kugona kwedu nekukura nevatinoshanda navo bhizinesi, shandira vatengi zvakanaka uye tibudirire pamwechete mukukurudzira hukama hwakanaka hwekushanda kwenguva refu
Iva nechokwadi chepamusoro chebatsiro revatengi mukati mese. Govera zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamutengo unodhura. Inopa nekukurumidza technical technical uye chigadzirwa rutsigiro masevhisi. Kuchengetedza kuendesa panguva yakakodzera yemasheya uye ekuchengetedza-zvikamu zviripo.
Sekutarisa kwedu kwepakati pebhizimusi muOffshore uye Onshore Oiri & Gasi munda, isu takazvipira kuwedzera zvimwe zvigadzirwa zvekupa kuti zvirinani kusangana nevatengi vedu vachichinja zvido uye kuzviisa pachedu sekiyi mutambi mundima iyi.